A Meaningful Arr-Nar | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
← The World of Disband
The Role of Literature in Nation Building →
December 17, 2009 · 5:33 pm
A Meaningful Arr-Nar
10 responses to “A Meaningful Arr-Nar”
မုန့်ခိုးစားနေမယ့် ကောင်မလေးရုပ်နဲ့ ပေးသမျှယူပြီး ပြီတီတီနဲ့ အားနာလို့ လှည့်ထွက်လာတဲ့ ကိုသင်ကာရုပ်။ နှစ်ရုပ်လုံးကို မြင်ယောင်မိတယ်။ ဟိ
စိတ်ထားတတ်ရင် မြတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ တူသော အကျိုးပေးပါစေ…
ကိုသင်ကာကြီး အကြင်နာတရား ကြီးမားပုံများ 😀
အားနာတယ်ဆိုတာကို အဓိပ္ပါယ် ပြောပြသွားဦးလေ… အဲ့.. meaning ကို ပြောတာနော်.. 🙂
ဘိုလိုရော… ထိုင်းလိုရောပေါ့….. 😀
” ခေါ်ထောခ” ဆိုတာက ???
btw အတွေးတွေလွန်ပြီး စက်ဘီးကျန်ခဲ့တာက တော်သေးတယ်… ၀ယ်ထားတဲ့.. အအေးဗူးကို ၀ယ်ပြီး ပြန်ကျန်ခဲ့မှ ဒုက္ခ 😛
အားနာ – be embarrassed by feelings of respect, delicacy; be restrained by fear of offending. (wxPyDict)
ထိုင်းလိုက “ကရန်ဂျိုင်း” ဆိုတာ အားနာတာပါ။
“ခေါ်ထောခ” က “တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါကြောင်း။
ပြန်ပြောသင့် မပြောသင့် စဉ်းစားတာနဲ့ပဲ စက်ဘီးက မေ့ကျန်တာပါ။ 🙂
ကိုသင်ကာရေ…..စက်ဘီးကျန်ခဲ့တာ ပြန်ရလားဟင်..ကျွန်မလည်း စက်ဘီးစီးရတာ အရမ်းသဘောကျတာ 😀
မာရစ္စာ ရဲ့ “အားနာတယ်ကို နားလည်ကြည့်ခြင်းနှင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအရ သတ်မှတ်ပုံကို ဖော်ထုတ်ကြည့်ခြင်း” စာတမ်းကို ဖတ်ဖူးရင် ဝေမျှပေးပါလား ကိုသင်ကာ
တစ်လက်စတည်း လန်ထောင် စပ်စုလေး နဲ့ လန်ထောင် စပ်စုကြီး အကြောင်းလဲသိချင်ပါသေးတယ်။
မရစ္စာရဲ့ စာတမ်းကို ခွင့်တောင်းကြည့်ပါဦးမယ်။
ဦးစပ်စုရဲ့ စာအုပ်လင့်ခ်တွေ မေးလ်နဲ့ ပို့လိုက်ပါပြီ။ လန်ထောင်စပ်စု ဂျင်နရေးရှင်းကို ဒီမှာ ကြည့်ပါ။
လုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းတယ် အကိုရေ.. 
ဆာထု … ဆာထု …. ဆာထု !